Waxaan dhawaan u qaaday gabadhayda 9 jirka ah caddaalad, Tafaariiqda dharka carruurta. Laga bilaabo bilawgii maareeyuhu wuu i duqeeyey, 5 daqiiqo gudahood, talooyinka wax soo saarka iyo dallacsiinta. Tani waxay socotay 30 daqiiqo ilaa aan ku qasbay inaan iskuulkeeda ku barto aragtida macaamiisha iyo dookheeda.
Barnaamijka emaylka xun wuxuu u eg yahay qof iib ah oo aan waxtar lahayn. Intii aad aqrin lahayd xiisaha wejiyada macaamiishaada, dareento saameynta xun ee iibka, ama kiiskeyga, maqal qallafsanaanta hadalladooda; suuqgeynta emailka ayaa kuu sheegi karta ku dhowaad wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato macaamiishaada waxayna kaa caawin kartaa inaad wax badan iibiso.
Inaad dhaafto “Hi FNAME”
Aragtida loo baahan yahay si looga dhigo barnaamijka emaylkaaga mid faa'iido badan ayaa horayba ugu jirta talooyinka farahaaga waana qaali. Waxay kuugu timaadaa qaab xog ah. Uma jeedo macluumad furan oo guji, in kasta oo ay taasi wax badan kuu sheegi doonto, waxaan ka hadlayaa xog kuu oggolaan doonta inaad khibrad u yeesho qof kasta oo ka mid ah macaamiishaada.
Hubaal, salaanta shaqsiga ah inta badan sifiican ayaa loo aqbalaa laakiin sidaan ku sheegay Suuqge Sare oo dhawan article, Ololeyaasha Maalinta Jacaylka ee sanadkan ayaa ahaa kuwa adeegsaday xog qoto dheer, sida taariikhda wax iibsiga iyo astaamaha macaamiisha, si ay dalabyadooda uga dhigaan kuwo shaqsiyeed sidaa darteedna ay aad ugu habboon yihiin. Maqaalka, waxaan si guud uga hadlayey tafaariiqleyda laakiin shirkadaha adeegga sidoo kale waxay leeyihiin dilal xog fudud oo si fudud loo heli karo si loola socdo (ama xitaa loo saadaaliyo) ujeedka iibsashada macaamiishooda iyo sidoo kale aqoonsiga fursadaha iibka iyo iibinta.
Maxay Tahay Inaad La Shaqeyso?
Ilaha xogta waxqabadka leh ayaa umuuqda kuwo aan dhamaanayn, laakiin halkan waxaa kuqoran qaybo yar iyo tusaalooyin gaar ah:
Profile: Qiyaas inaad maamusho wakaalad socdaal aniguna waxaan ahay 65-ka y / o rajadaada, ma u malaynaysaa inaan si fiican uga jawaabi doono dalab ka turjumaya meelaha waa weyn ee caanka ah? Hadda ka fikir in sawirada ku jira dalabku ay ahaayeen kuwa qancinta lacagta-timaha. Mise waxaan joogaa waqtiga xeebta galbeed websaydhkaaguna wuxuu jadwal u yahay 1-da duhurnimo ee bariga, miyaan u badan tahay inaan sii haysto kursigeyga haddii iimaylka uu akhriyo 11-ka subaxnimo
Taariikhda Iibsiga: Haddii aan hadiyado ku iibsaday taariikhda maanta ee maanta ama ku dhow, laba sano oo isku xigta, ma laga yaabaa inaan doonayo inaan iibsado mid kale sannadkan? Kawaran haddii talooyinka hadiyadaha cusub ay la jaan qaadayaan iibiyadaydii hore ee kuwa iibsadayaasha hadiyadda kale? Taa bedelkeeda, ka waran haddii aan horey u soo iibsaday badeecadaada aasaasiga ah, ma waxaad u malaynaysaa inaan doonayo inaan maqlo inta lacag ah ee aan keydin lahaa, haddii aan sugi lahaa oo keliya? Taabadalkeed, miyaanan jeclaan lahayn inaan wax ka ogaado waxyaabaha aad bixiso ee labaad?
Activity: Waxaa laga yaabaa inaan soo dejiyey saddex waraaqo cad oo isdaba joog ah 30 maalmood gudahood, laakiin weli wax iibsi ah ma sameyn, ma fiicnaan laheyd inaad igu casuuntid dood ku saabsan baahideyda gaarka ah? Ama waxaa laga yaabaa inaan ka jawaabin dalabyadaada in muddo ah, miyaan ku fiicanahay dalab dib-u-hawl-celin ama sahamin qanacsanaanta?
Doorashooyinka: Ka soo qaad in aad haysato 10 badeecadood oo kala duwan laakiin anigu waxaan ahay iibiyaha daneynaya kaliya waxyaabaha 1-5. Miyaanay ahayn in la i galiyo qayb lala iibiyeyaasha kale? Ka waran haddii aan ahay isticmaale toos ah laakiin waxaan kaliya doonayaa inaan helo macluumaad waxbarasho, marka loo eego dhiirrigelinta, waxaan u badan tahay inaan sii ahaado xamaasadee oo aan la wadaago macluumaadkaaga haddii aan helo waxa aan runtii doonayo oo keliya?
Waa Fududahay oo Qaali Ahayn Fulinta
Marwalba waan layaabaa markay suuqleyda SMB dhahaan adeegsiga xogta heerkaan ah kaliya wiilasha waaweyn. Taasi waxay run noqon kartaa sanadihii la soo dhaafay, laakiin maanta ESP kasta oo u qalanta milixdoodu waxay si fudud ula midoobaysaa xalalkaaga CRM ama E-commerce iyo shabakadda Analytics. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad dhexgaliso oo ay ugu muhimsantahay tijaabiso.
Tags: Activityemailwaxqabadka emaylkashaqsiyeynta emaylkadoorbidida emaylkacinwaanka emailkaiibsiga emaylkataariikhda iibsashada
Maya, maahan wax fudud oo aan qaali ahayn in lagu lifaaqo iibsadaha macaamiisha iwm barnaamijyada suuqgeynta iimaylka. Ku dhowaad dhammaan is-adeegga ESP's ma bixiyaan xitaa iota isku dhafka. Had iyo jeer waa mas'uuliyadda barnaamijka POS ama barnaamijkaaga internetka si loo dhexgeliyo loona riixo macluumaadka "qaybinta" khuseeya xiriirka ESP.
SMB waxay rabaan wax fudud oo is-adeegsi ah.